Tonga ny OTA-16 miaraka amin'ny ampahatelon'ny binary nohavaozina | Ubunlog
OTA-16, misy ny kinova faharoa manan-danja indrindra amin'ny Ubuntu Touch amin'ny tantarany
Amin'ny faran'ny taona 2020, UBports Nanomboka izy kinova amin'ny rafi-piasan'ny findainy izay nanatsara fatratra. Ny iray tamin'izy ireo dia nahasarika ny saiko manokana: ny fanovana ny endrika sy ny fanatsarana hafa natao tamin'ny tranokala misy azy, Morph Browser. Ary io dia, amin'ny rafitra miasa izay ampiasain'ny browser matetika dia fanovana mihoatra ny ilaina izany. Ora vitsy lasa izay, nahavita ilay tetikasa nariana la OTA-16 avy amin'ny Ubuntu Touch, ary famotsorana lehibe kokoa noho ny feo.
Raha ny marina, rehefa avy nanonona ireo fitaovana vaovao tohanan'ny Ubuntu Touch dia milaza amintsika ny UBports fa izy ilay famoahana faharoa lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny Ubuntu Touch, mijanona ao ambadiky ny OTA-4 izay niarahan'izy ireo nanao ilay dingana fa tsy miorina amin'ny Ubuntu 15.04 ka hatramin'ny Ubuntu 16.04 izay ifotoran'ny kinova ankehitriny. Saingy, ho fanampin'izay, ny OTA-16 dia manomana ny làlana hafa manan-danja izay hitranga amin'ny tapaky ny 2021.
1 Asongadin'ny OTA-16
2 Efa eo amin'ny fitaovanao
BQ E5 HD Ubuntu Fanontana
BQ E4.5 Fanontana Ubuntu
BQ M10 (F) HD Ubuntu Fanontana
Nexus 7 2013 (modely Wi-Fi sy LTE)
OnePlus 3 sy 3T
Qt 5.12.9, miakatra avy amin'ny v5.9.5. Manokatra ny lalana amin'ny fampidirana ny fototra amin'ny Ubuntu 20.04 io.
Maherin'ny ampahatelon'ny binaries no novaina tamin'ity famotsorana ity.
Fanatsarana ny Morph Browser:
Fanatsarana ny rafitra fampidinana. Tsy efijery feno intsony izao ary mahita kisary etsy ambony ianao izay mihetsiketsika rehefa vita ny fisintomana.
Ny pejy fisintomana koa dia misy tontonana "Fampidinana vao haingana".
Nisy fanaraha-maso nampiana ao amin'ny manager tab izay mamela anao hamoha ny takelaka farany nikatona farany.
Ankehitriny dia toa tsara kokoa, na ampiasaintsika amin'ny endrika birao na raha ampiasaintsika amin'ny kinova takelaka.
Ny fanohanana fandraketana horonantsary dia navitrika tamin'ny fitaovana Android 7.
Fanohanana ho an'ny GStreamer ahafahana manafaingana ny fitaovana ao amin'ny fakantsary PinePhone.
Fanatsarana ny zava-bita.
Ny installer Anbox dia efa tafiditra ao anaty default, saingy tsy maintsy ataonao ny fametrahana ny tanana.
Efa eo amin'ny fitaovanao
Ubuntu Touch OTA-16 dia misy amin'ny fantsom-pahitalavitra misy an'ireo fitaovana tohana, ao anatin'izany ny PinePhone sy PineTab. Saingy mila manisa ianao, ary tadidin'i UBports, izany amin'ny fitaovana PINE64 miseho miaraka amina isa hafa izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Phone » OTA-16, misy ny kinova faharoa manan-danja indrindra amin'ny Ubuntu Touch amin'ny tantarany
Apostrophe, mpamoaka lahatsoratra Markdown loharano maimaimpoana hafa
Plasma 5.21.3 tonga manamboatra bug, fa tsy misy tena matotra